IP Inodziya: Vaka Mbiri Yako Idzva Neiyi IP Kupisa Kushanda | Martech Zone
IP Inodziya: Vaka Mbiri Yako Idzva Neiyi IP Kupisa Kushanda
Chishanu, December 25, 2020 Chishanu, December 25, 2020 Douglas Karr
Kana iwe uine yakakura saizi yekunyorera base uye wakato fanira kuenda kune nyowani email sevhisi webasa (ESP), iwe ungangove wave kuburikidza nemarwadzo ekuwedzeredza rako nyowani mukurumbira. Kana zvakatonyanya ... hauna kuzvigadzirira uye pakarepo ukazviwana uri mudambudziko nerimwe rematambudziko mashoma:
Yako nyowani Email Service Provider akagamuchira chichemo uye ipapo ipapo akakutadzisa iwe kubva kutumira imwe email kusvikira wagadzirisa nyaya.
Inopa Internet Service Provider kana mukurumbira-wekutarisa sevhisi haizive yako IP kero uye inovhara yako yakawanda mushandirapamwe.
Anopa Internet Service haapi mbiri kune yako nyowani IP kero uye nzira dzako dzese email yako kune junk folda.
Kutanga nerutsoka rwerudyi ne IP Kudziya zano rakakosha kana uchinge watamira kune mutsva email service provider. Vazhinji Vemeseji Vebasa Vanopa havaite chibvumirano chakakura kwazvo nezvazvo… vanongokuyeuchidza kuti udziye yako itsva IP kero. Pamhedzisiro yepamusoro, zvakadaro, harisi basa rakareruka:
Iwe haudi kutora chero njodzi mukutumira kwako kwekutanga, saka kugovera yako yekunyorera base kune vako vanyowani vanyori vanonyanya kukosha. Kana mumwe munhu asina kumbovhura kana kudzvanya paemail mumwedzi… pamwe haudi kuve navo pane ako IP Anodziya macampaign.
Vanenge vese vanyorese dhatabhesi vane yakaipa email kero uye spam musungo email kero ivo ivo vasina kumbobvisa kana kuchenesa. Usati watombotumira IP Inodziya mushandirapamwe, iwe unoda kuchenesa aya maemail kero kubva kudhatabhesi yako.
Yese ISP ine yakakwidziridzwa vhoriyamu yeemail kero kutanga nawo kuvaka mukurumbira nekufamba kwenguva navo. Semuenzaniso, Google inoda kuti iwe utumire iyo diki diki pakutanga, wobva wakura iyo huwandu nekufamba kwenguva. Nekuda kweizvozvo, iwe unofanirwa kunyatso sarudza uye kuronga zvirongwa zvako.
Mushure mekugadzira nekuvandudza nzira dzakabudirira dzePI dzekudziya dzemazana evatengi, ini nevamwe vangu neni Highbridge tafunga kugadzira yedu pachedu sevhisi pagore rapfuura kuti zviite nyore maitiro. Zvimiro zve IP Warm zvinosanganisira:
Kuchenesa -Pamberi-kuchenesa kweanyorese data kudzikisira ma bounces, enguva diki email kero, uye spam misungo. Isu tinodzvinyirira izvi zvinyorwa mumushandirapamwe wakagadzirwa uye tinodzosera iyo data kwauri kuti uvandudze zvinyorwa zvako.
Prioritization - Isu tinokoshesa vanyoreri zvichibva mukubatana kwavo nekambani kuona kuti vanyori vanonyanya kushandira vanotumirwa mishandirapamwe yeIP Warming.
Domain Intelligence - Mazano mazhinji ePIP Anodziya anongokuudza iwe kuti utarise email yako neIP; zvisinei, izvo hazvisi nyore sekutarisa domain yeiyo email kero. Isu tinogadzirisa domain uye tine huchenjeri pane iro basa ravari kushandisa kugadzirisa mishandirapamwe. Izvi zvakakosha nemakambani eB2B ayo ari kunyanya kutumira kunzvimbo dzemabhizinesi uye kwete zvakajairika maemail evatengi.
urongwa - Isu tinodzorera marondedzero uye iyo yakakurudzirwa kutumira purogiramu kwauri kuitira kuti iwe ugone kupinza zviri nyore zvinyorwa uye kuronga izvo zvinotumira. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kugadzira mushandirapamwe uye kuronga izvo zvinotumira!
Uri Kuenda Kune Yakagovaniswa IP Kero neako Nyowani ESP?
Kunyangwe iwe uri mutengesi mudiki weemail uyo ari kuenda kune yakagovaniswa IP kero ine nyowani Email Service Provider, iyo yekuchenesa uye mushandirapamwe gadziriro yatinoitira iwe inokuchengetedza iwe kubva padambudziko.
IP Warm Roadmap
Tiri kushanda kusimudzira chikuva kunyangwe zvichienda mberi neinobatanidza dhata uye kunyange zvakarongwa kutumira kuburikidza neAPI kuitira kuti makambani atomboita zvishoma. Parizvino, inonyanya kushanda yekumashure-asi isu tiri kushanda zvakatsiga kumberi-kumagumo uye izvi zvinowedzera.
Kana iwe uri kugadzirira kutamira kune nyowani Email Service Provider, ino inguva huru yekushandisa chikuva sezvo isu tiri kuwedzera kutsigira uye kunyanya maoko-nevatengi vedu!
Tanga ne IP Inodziya
Kuzivisa: Ndiri mudiwa mukati IP Warm.
Tags: vakazvipira ipemail kuburitswaemail mukurumbiraemail service providerkunyanyaip mukurumbiraip inodziyaip kupisa appip kupisa basayakagovaniswa ip
Iko Kukwira KweDhijitari Wallet Kubvumidzwa Panguva Yechirwere
Kwidziridza Kuunura Kwako neKushambadzira Cloud's Sender Authentication Package